मौद्रिक नीतिमा खतिवडाको छायां र गभर्नरको कार्यशैली
जनतापाटी शुक्रबार, असार २६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र वैंकले केही दिनमा सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति कस्तो आउला ? अहिले धेरै मानिसको मनमा चासोको विषय बनेको छ । खासगरि वैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि बजेटभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ, मौद्रिक नीति । त्यहीकारण कोरोनाले लथालिंग अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको लागि मौद्रिक नीतिले संजिवनी बुटीको काम गर्ला ? अहिले धेरै मानिसहरु यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पटक पटक मौद्रिक नीतिबाट राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउने बताइसकेका छन् । विहिबार राष्ट्र वैंकद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पनि उनले त्यहीकुरामा जोड दिएका छन् । उनको जोड एउटै छ-मौद्रिक नीतिबाट ऋणी अथवा उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउनेछन् ।
उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिनुको अर्थ वैंक तथा वित्तीय संस्थामा अतिरिक्त चाप सृजना गर्नु हो । त्यसैले राष्ट्र वैंकको लागि एकातर्फ कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीहरुको लागि राहत दिनु पर्ने दवाव छ भने अर्काेतर्फ त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरुबाट वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसमाथि गभर्नर अधिकारीमाथि व्यक्तिगतरुपमा अर्काे पनि दवाव छ-डा.युवराज खतिवडाको छांयाबाट मुक्त हुने ।
गर्भनर अधिकारीको कार्यशैलीलाई बुझेकाहरु उनले प्रभावकारीरुपमा देशको वित्तीय क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्नेमा विश्वस्त छन् । किनकी विगतमा लामो समय राष्ट्र वैंकमा विताएका उनी आर्थिक क्षेत्रको ‘क्राइसिस म्यानेजमेण्ट’को लागि देशमै संभवतः अब्बल मानिन्छन् । राष्ट्र वैंकको निर्देशक हुंदा देखि नै उनको त्यो क्षमता देखिदैं आएको छ । यदि अधिकारीले ‘हात नहालेको’ भए नेपाल वंगलादेश वैंक लगायतका धेरै वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ध्वस्त भैसक्थे । ‘म्याक्रो भन्दा माइक्रोमेनेजण्ट’मा अब्बल मानिने अधिकारीको व्यवसायिक कौशलताको नेतृत्वमा ती वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुर्नजीवन पाएका थिए ।
वैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा स्तरोन्नती, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइने कर्जाको सिमा तोक्दै वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसको लागि उत्प्रेरित गर्ने मात्र होइन, व्याजदरको अनुपात मिलाउनेसम्मका काममा अधिकारीको अब्बलता देखिन्छ । ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेका ठूला ऋणीहरुबाट कर्जा असुल गराएर वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उद्धार र संरक्षणको साथै दोषि व्यक्तिहरुमाथि कारवाहीमा समेत उनको क्षमता प्रदर्शन भैसकेको छ ।
ती घटनाहरुलाई देखे भोगेका मानिसहरु अहिले देशको सिंगो वित्तीय क्षेत्र धर्मराइरहेको बेला अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेमा आशावादी छन् ।
विगतमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर रहंदाका मौद्रिक नीतिहरुको मुख्य मस्यौदाकार पनि अधिकारी नै थिए । त्यसैले पर्दा पछाडि बसेर मसिना अर्थतन्त्रका रेसा रेसा केलाउने क्षमता भएका अधिकारीको लागि मौद्रिक नीति नौंलो अनुभव होइन ।
तर, अहिलेको स्थिति फरक छ । एक त हिजो जस्तो उनी ‘पर्दा पछाडि’ होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । अर्काे, देशको वित्तीय अवस्था पनि निकै फरक छ । हिजो कुनै खास क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति जारी गरे पुग्थ्यो, वाहवाहि पाउने अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो छैन । खासगरि कोरोना माहामारी पछि देशको सबै क्षेत्रको अवस्था लथालिंग भएको छ । साना, ठूला कुनै पनि खालका ऋणीहरु ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । समयमा ऋण चुक्ता नहुनुको अर्थ सम्पूर्ण वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा दवाव सृजना गर्नु हो । त्यसको अर्थ नेपाल राष्ट्र वैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुबाट ५० हजार १ लाख रुपैंया कर्जा लिनेहरु देखि अर्बाैं कर्जा लिनेहरुसम्मलाई, डेरावालदेखि घरवेटीहरु सम्मलाई, किराना पसलदेखि उद्योगि व्यवसायीहरुसम्म, तरकारी फलाउनेदेखि तारे होटलहरु चलाउनेसम्मलाई राहत दिने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै सहज काम होइन । तर, विगत देखि नै अधिकारीसंग संगत गरिरहेका हुन्छन्—उनीसंग यस्ता समस्याहरुबाट पार पाउने क्षमता छ ।
अधिकारीको लागि मुख्य चुनौति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुन् । किनकी अधिकारी खतिवडाको कुनै पनि कुरा काट्न सक्दैनन् । खतिवडाकै कारण डेपुटी गभर्नर र अहिले गभर्नर बनेका अधिकारीका अहिलेका कतिपय काममा खतिवडाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको राष्ट्र वैंककै उच्च अधिकारीहरुले महसुस गर्न थालेका छन् । मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा पनि त्यही अवस्था देखिएको छ । खतिवडा जस्तै गरि सानो घेरामा रमाउने स्वभाव भएका अधिकारीले मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा पनि आफूहरुसंग भन्दा खतिवडा र उनी आसपासका व्यक्तिहरुसंग छलफल गरिरहेको महसुस कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरुले गरिरहेका छन् ।
‘यस्तै हो भने त मौद्रिक नीति पनि अर्थमन्त्रालयबाट जारी गरे भैहाल्यो नी’ राष्ट्र वैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशकको यो टिप्पणीले अधिकारी कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग मात्र होइन, जो सुकै व्यक्तिसग पनि छलफल गर्न सक्छन् । खतिवडाले गभर्नर हुंदा ‘वैंकरहरुले राष्ट्र वैंकसंग माग राख्ने हो, मौद्रिक नीतिको बारेमा सुझाव दिने होइन’ भन्दै व्यवसायीका कुरा सुन्न पनि चाहादैंनथे । तर, अधिकारीले लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष भेट्न नपाइरहेको अवस्थामा पनि अनलाइनबाट समेत सुझावहरु लिइरहेका छन् र सबैले दिएका सुझाव र गुनासाहरुलाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । त्यसबाट सरोकारवालाहरु हाम्रो गुनासो सुनुवाई हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन् । तर, गभर्नर अधिकारीको मुख्य सांचो खतिवडा हुन् र उनले त्यसलाई कसरी घुमाउंछन् भन्ने कुराले मौद्रिक नीति कस्तो आउंदैछ भन्ने मात्र होइन, देशको वित्तीय अवस्थाको गन्तव्य र गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको गन्तव्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।